Iithayili, i-stacked okanye i-windows egciniweyo Windows 10, i-Emulator.online ▷ 🥇
Windows 10 ibandakanya iindlela ezininzi zokucwangcisa ngokuzenzekelayo windows ezivulekileyo, kodwa zifihlakele kancinci kwaye nokuba kunqakrazo olunye kwi-taskbar, ukuba asazi, sinokugqibela ngokungahoyi naphakade.
Umzekelo, xa ususa ifestile usiya kwelinye icala, kunokwenzeka ukuba uthayile windows ngokwahlulahlula iscreen kubini okanye kwezine (ngokutsala iifestile ukuya ezimbombeni). Unokwenza okufanayo ngokunqakraza kwisithuba esingenanto kwibar yomsebenzi ngeqhosha lasekunene le mouse kwaye usebenzisa ukhetho Beka iifestile ecaleni kwenye.
Ngoku ucofa iqhosha lasekunene le mouse, ungakhetha ukhetho bonisa iifestile ezixineneyo, yenye enye indlela yokubeka, ukwahlula isikrini ngokulinganayo.
Ngeendlela ezimfutshane zekhibhodi, emva koko unokucinezela izitshixo kunye Utolo lweWindows + phezulu ukwandisa ifestile, cofa iqhosha I-Windows + ezantsi utolo ukubuyisela iwindow kwesona sincinci sayo kwaye ucinezele amaqhosha kwakhona I-Windows + ezantsi utolo ukunciphisa iwindow. kwibar yomsebenzi.
Ngeenkqubo ezifana nePowertoys Windows 10, kunokwenzeka ukwenza imisebenzi eyongezelelweyo, njengokudala ubeko lwefestile yesiko, ngokukhetha ubungakanani kunye nemilo yewindows nganye evulekileyo.
Sisenokufumana iindawo ezininzi amaqhinga okulungiselela windows kwiWindows desktop.
Kule nqaku sifumanisa enye iluncedo, kulula ukuyisebenzisa kwaye yenza ukuba i-desktop ibe lula kakhulu: ukubakho kweefascading windows, ukuze ugcine uvule ukuya kuthi ga kwishumi okanye nangaphezulu zisasazeke kwidesktop, ubona isihloko sayo ukuze ukwazi ukuzibona. zonke kunye kunye nokuzikhetha ngokukhawuleza.
Ku Windows 10 unganqakraza ekunene kwibar yomsebenzi uze ukhethe ukhetho "Ukugqithisa iifestileZonke iiwindow ezingancitshiswanga ziya kulungiswa kwangoko kwisitaki sedayagonal esitshixwayo, enye phezu kwenye, nganye ilingane ngokulinganayo. Ibha yetayitile yefestile nganye izakuboniswa ngokucacileyo, yenza kube lula ukuyenza Nqakraza enye yazo ngesikhombisi semouse kwaye uzise iwindow ngaphambili.Unganqakraza kwi icon yesihlobo kwibar yomsebenzi ukubazisa ngaphambili.
Nje ukuba ingxangxasi yenziwe, inokurhoxiswa ngokucinezela iqhosha lasekunene kwakhona kwi-taskbar kwaye ukhethe ukhetho "Hlehlisa ukugqitha zonke iiwindow"Oku kuvela kwimenyu. Oku kuzakubuyisela ulungelelwaniso lweefestile njengoko zazinjalo ngaphambili. Nangona kunjalo, ukuba ushenxisa enye yeefestile ezigqagqeneyo, awunakulurhoxisa ulungiselelo lwecascade.
Qaphela ukuba i-cascading windows yayisele ikhethiwe kwi-Windows 95, xa izixhobo zekhompyuter zinqongophele kwaye zisonjululwe. Olu hlobo lokujonga lufana kakhulu nolo lufunyenweyo, kude kube kutshanje, ngokucinezela amaqhosha eWindows-Tab ngaxeshanye (namhlanje kwiWindows 10 imisebenzi yokujonga ivula).